Mareykanka oo ciidan ah u diraya Ciraaq - BBC News Somali
Mareykanka oo ciidan ah u diraya Ciraaq
11 Juunyo 2015
Image caption Qaar ka mid ah ciidammada Mareykanka ee ka howlgeli jiray magaalada Baqdaad
Aqalka Cad ee looga arrimiyo waddanka Mareykanka, ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in istaraatijiyadiisa lagu tababarayo ciidanka Ciraaqiyiinta, laguna diiwaan galinayo dagaalyahanno ka soo jeeda qabaa'ilka sunniyiinta ay guulaysan doonto, dagaalka lagula jiro kooxda Dowladda Islaamiga ah.
Goor sii horreysay ayaa madaxweyne Obama ayaa waxa uu ansixiyay in ilaa 450 milateriga Mareykanka ah loo diro waddanka Ciraaq si ay talo iyo tababarba u siiyaan ciidammada dagaalka kula jiro maleeshiyaadka Dowladda Islaamiga ah.
Ciidammada Mareykanka ayaa waxa uu saldhigoodu noqon doonaa gobolka Anbaar, halkaasi oo maleeshiyaadka Daacish ay guulo ka gaareen, hasayeeshee ciidammadan ayaanan wax dagaal ah ka qeyb qaadan doonin.
Afhayeenka Aqalka Cad, Josh Earnest, ayaa sheegay in maamulka Mareykanka uu hubo in istiraatiijiyadda dagaalka ka dhanka ah Daacish ay shaqeyn doonto.
Mr Earnest ayaa sheegay in Mareykanku uu doonayo in uu Ciraaqiyiinta u tababaro sidii ay naftooda u difaaci lahaayeen.
Sidoo kale Afhayeenka Aqalka Cad ayaanan meesha ka saarin suuragalnimada in milateri kale oo dheeraad ah mustaqbalka loo diro gobolka.